आत्महत्यालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने ? - ।। Naya Kuro ।।
८ भाद्र २०७६, आईतवार १३:५५ August 25, 2019 Naya KuroLeaveaComment on आत्महत्यालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने ?
पाँचथर । गत साउन २० गते दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तीन जनाले आत्महत्या गरेको समाचार प्रहरीले दियो । ती तीन घटनामध्ये एउटा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ मा र अर्को वडा नं १९ बिजौरीमा थियो । अनि अर्को घटना भएको थियो राजपुर गाउँपालिका–६ गङ्गदीमा ।
आत्महत्या गर्ने ती तीनले एकै किसिमको विष सेवन गरेको पत्ता लागेको थियो । सो जानकारी उनीहरुको शव परीक्षण रिपोर्टबाट खुलेको थियो ।
तुलसीपुर–९ मा ३७ वर्षीय मानबहादुर विक, बिजौरीकी ५० वर्षीया बमकुमारी विक र गङ्गदीकी थारू समुदायकी एक २१ वर्षीया युवतीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए ।
उनीहरु तीनै जनाको उपचारथका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनीहरुले दिउँसोको समयमा विष सेवन गरेको परिवारले जनाएका छन् । विष सेवन गरेको थाहा पाएपछि अस्पताल पुर्‍याइएको भए पनि उनीहरुलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
तर, उनीहरुले किन विष सेवन गर्नुपरेको हो भन्ने बारेमा भने केही खुलेको छैन । प्रहरीले यस विषयमा गहन अध्ययन शुरु गरेको जनाएको छ तर कारण भने पत्ता लागिसकेको छैन ।
यी तीन दिनभित्रका आत्महत्याका चार घटना उदाहरण मात्र हुन् । दाङ जिल्लामा प्रायः तीनदेखि चार दिनसम्ममा यस्ता दुर्घटनाको समाचार आउने गरेको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद् छ ।
दाङमा गएको वर्ष दिनयता मात्र ९५७ आपराधिक घटना घटेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी २०९ आत्महत्याका घटना रहेको दाङ प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तीमध्ये १३२ झुण्डिएर, ७७ विष सेवन गरेर रहेका छन् । तीमध्ये १११ पुरुष, ९८ महिलाले आफैँले आफैँलाई हत्या गरेका छन् । यसमा बालबालिकाको सङ्ख्या १६ रहेको दाङ प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आत्महत्या गर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा बढी जनजाति समुदायका ७४, दलित ५६, क्षेत्री ३७, ब्राम्हण ३०, मुस्लिम १२ रहेको पनि प्रहरीको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आत्महत्या गर्नेमध्ये धेरैजसो विवाहितको सङ्ख्या देखिन्छ । तथ्याङ्कले १८९ विवाहित व्यक्तिले आत्महत्या गरेको देखाएको छ । त्यसैगरी २० अविवाहित छन् ।
आत्महत्या गर्नुको कारणमा सबैभन्दा धेरै गरीबीको कारण देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । गएको वर्षको तथ्याङ्कमा ९७ ले गरीबीका कारण आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी ४८ मानसिक असन्तुलन, १८ प्रेममा असफल, ११ घरेलु हिंसाका कारण रहेको सो तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लामा ८२९ को अकालमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क दाङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
सो तथ्याङ्कअनुसार दाङ जिल्लामा आत्महत्यासम्बन्धी विसं २०७२ साउनदेखि २०७६ असारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ८२९ को अकालमै मृत्यु भएको देखिन्छ ।
यसरी ज्यान जानेमा ४९.५२ प्रतिशत पुरुष र ४६.९३ प्रतिशत महिला छन् । उक्त सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी झुन्डिएर ६३.०६ प्रतिशत आत्महत्याको सङ्ख्या छ ।
यसपछि विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने ३६।१३ प्रतिशत सङ्ख्या छ । आफैँलाई आगो लगाएर, हााफालेर र आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका समेत घटना भएको पाइन्छ ।
व्यक्तिको उच्च महत्वकाङ्क्षा र विभिन्न कारणले तनाव हुने र त्यसपछि ‘डिप्रेसन’ भएका कारण पनि धेरैजसोले आत्महत्या गर्ने गरेको बताउँछिन सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका सदस्य निरा योगी ।
उनी भन्छिन “सबैको सामूहिक प्रयासले गाउँ तहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आत्महत्या गर्नु हुँदैन भन्ने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।”
“आत्महत्या आफैंले आफैँलाई हत्या गर्नु हो, यसमा विभिन्न कारण छन् र त्यसमा पनि प्रमुख कारण ‘डिप्रेसन’ नै हो”, डा किशोर खत्रीले भने । उहाँ यस्ता व्यक्तिलाई समयमै उपचार र जीवनबारे बुझाउन सकिएमा आत्महत्याका घटनामा कमी आउने बताउँछन् ।
आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम विभिन्न विद्यालय, गाउँ–टोलमा लैजान सबैकोे सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछिन्, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का वडासदस्य सावित्रा गुरुङ ।
उनले आत्महत्या विभिन्न कारणले हुने गरेको भन्दै अब कारण पहिचान गरी यसलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने र वडास्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेको उनी बताउँछिन् ।
उनले आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्न मनोसामाजिक परामर्श गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले गरीबी, कमजोर मानसिकता, चिन्ता, भय र उच्च महत्वकाङ्क्षा व्यक्तिमा भएका कारण त्यो पूरा नहुँदा निराशा भएर आत्महत्या हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको बताए ।
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १०:४८ August 5, 2020 Naya Kuro
मन्त्रीले सामाग्री उपलब्ध गराइदिएपछी फाल्गुनन्दमा ५ वटा हेल्थ डेस्क
८ बैशाख २०७७, सोमबार २१:३४ April 20, 2020 Naya Kuro
२९ पुष २०७६, मंगलवार २०:४८ January 14, 2020 Naya Kuro